June 19, 2019 In: समाचार No comments
असार ४, काठमाडौं (अस) । सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरे पनि काठमाडौं उपत्यकावासीले विरोधका कार्यक्रम रोकेनन् । बुधवार उपत्यकावासीले विशाल प्रदर्शन गरे । माइतीघरमा आयोजित विशाल खबरदारी सभामा सहभागीहरुले गुठी विधेयक फिर्ता गरेर मात्रै नपुग्ने भन्दै यसको खारेजीको...	बिस्तृतमा
दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह : मुआब्जा विवादले कार्यान्वयनमा सकस
असारे विकास : एकै दिन रू. १७४ करोडसम्म निकासा
हेर्नुहोस् आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ को पूर्णपाठ
यस्तो छ आव २०७६/७७ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (हेर्नुहोस् पूर्णपाठ)
असार ४, काठमाडौं (अस) । सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरे पनि काठमाडौं उपत्यकावासीले विरोधका कार्यक्रम रोकेनन् । बुधवार उपत्यकावासीले विशाल प्रदर्शन गरे । माइतीघरमा आयोजित विशाल खबरदारी सभामा सहभागीहरुले गुठी विधेयक फिर्ता गरेर मात्रै नपुग्ने...	बिस्तृतमा
June 14, 2019 In: तीतो मीठो No comments
एक/दुईबाहेक नेपालमा चलेका ‘टीभी रियालिटी शो’ त्यति राम्रा, स्तरीय विषयवस्तु भएनन् भन्ने जनगुनासा धेरै सुनिन थालेको छ । प्रयास गर्‍यो भने कतै आफै पो एउटा खतरा कार्यक्रम बनाऊँ कि जस्तो लागेको छ । विषयवस्तु के हुन सक्छ भनेर गम खाँदै जाँदा एउटा गज्जबको कुरा फुरेको छ, जुन यस...	बिस्तृतमा
असार ४, काठमाडौं (अस) । बुधवार नेप्से कारोबार भएको तेस्रो घण्टामा शून्य दशमलव ३४ अंक (०.०३ प्रतिशत) बढेर १ हजार २५९ दशमलव शून्य १ विन्दुमा पुगेको छ । यस समयसम्मको कारोबार अवधिमा १६१ कम्पनीको २ हजार ६२३ पटकको कारोबारमा रू. १७ करोड ३१ लाख बराबरको शेयर...	बिस्तृतमा
काठमाडौं (अस) । रिबन इन्टरटेनमेन्ट प्रालिद्वारा आयोजित ‘मिष्टर एन्ड मिस एसईई अफ द इयर २०१९’ प्रतियोगिताको उपाधि अंकिश श्रेष्ठ र प्रिशा गिरीले जितेका छन् । अंकिश पब्लिक च्वाइस, फेसबुक च्वाइस, मष्ट ट्यालेन्ट, भ्यूवर्स च्वाइस र यूट्युव बेस्ट भ्यूज उपउपा...	बिस्तृतमा
फेरिदै राप्तीसोनारी गाउँ : संघीयतासँगै बढ्यो नेपाली नोटको कारोबार
कपुरकोटमा सुधारिएको चुलो बनाउने तालीम
असार ४ देखि टीभीएसको ‘सुपर सिजन फाइनान्स फेयर’ हुने
बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ सार्वजनिक
June 19, 2019 In: व्यङ्ग्यार्थ No comments
व्यङ्ग्यार्थ : सोमवार, २ असार २०७६
काठमाडौंको वनकालीमा मंगलवार चोयाबाट बुनेका डालाहरू विक्रीका लागि लैजाँदै ६८ वर्षीय अस्टबहादुर तामाङ । काभ्रेको पनौतीवासी उनले डालो प्रतिगोटा ४५० रुपैयाँमा विक्री गर्दै आएको बताए ।
लगनखेलमा लेयर प्रजातिका कुखुरा प्रतिगोटा रू. ३०० मा विक्री गर्दै महिला । कुखुरा फार्ममा नयाँ चल्ला राख्ने ठाउँ बनाउन भएको स्टक विक्री गरिन्छ ।
म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–१,गुर्जामा सोमवार भीरबाट निकालिएको मह संकलन गर्दै स्थानीय मह शिकारी । गुर्जाका स्थानीय यतिबेला मह शिकारमा व्यस्त बनेका छन् ।
बागलुङ नगरपालिका–११ रायडाँडामा पुग्नका लागि चापाखर्चको भीरमा बनाइएको कच्ची सडक । भिरालो जमीनमा घुम्ती नै घुम्ती पारेर नागबेली सडक निर्माण भएको छ ।
पंखबहादुर शाही दैलेख । सरकारले भारतीय सीमा रुपैडियादेखि सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला हुँदै चीनको सिमाना ना...	बिस्तृतमा
सन फ्रान्सिस्को (अमेरिका) । अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल कम्पनी फेसबुकले आफ्नो डिजिटल मुद्रा लिब्रा विश्वब...	बिस्तृतमा
हुवावेई पी ३०, हुवावेई पी ३० प्रो र हुवावेई पी ३० लाइट क्यामेरालाई विशेष जोड दिएर ल्याइएका सिरिजहरू...	बिस्तृतमा
नयाँ वागन आर सुजुकीको नयाँ हार्टेक्ट प्लेटफर्ममा निर्माण गरिएको छ । यो पहिलेको वागन आरभन्दा बढी हलुक...	बिस्तृतमा
काठमाडौं । तपाईं पक्कै पनि कुनै संस्था वा कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ होला । तर, महीना बित्न पाएको छैन,...	बिस्तृतमा
June 17, 2019 In: अन्तरवार्ता 1 Comment
केशवकुमार पौडेल २६ वर्षदेखि लघुवित्तको क्षेत्रमा आबद्ध रहँदै आएका छन् । यो क्रममा उनले तत्कालीन निर्धन उत्थान बैंकमा २२ वर्ष काम गरे । त्यसपछि कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थामा करीब डेढ वर्ष र इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा करीब ६ महीना...	बिस्तृतमा
काठमाडौं (अस) । देवः विकास बैंकले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ एरिचोकमा सोमवार सुर्खेत शाखा सञ्चालनमा ल्...	बिस्तृतमा
२६ वर्षदेखि समृद्धिको सपना साकार पार्दै
गानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्न, धितोपत्र कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न, उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन, देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले २०५० जेठ २५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना भएको...	बिस्तृतमा
नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार विकास तथा सुधारका २६ वर्ष : एक परिदृश्य
ब्रोकरले डिलरको काम र एड्भाइजरी सेवा दिनुपर्छ
बोर्डको काम निजीक्षेत्रमैत्री हुनुपर्‍यो
चिनी उखु विशेष : गुलियो उत्पादनको तीतो कथा
नेपाल जलस्रोतमा धनी छ भनिए पनि र सरकारले ‘बोटल्ड वाटर’ निर्यात गर्ने भनेर गृहकार्य शुरू गरेको भए पनि...	बिस्तृतमा
सूदूरपश्चिम प्रदेश नेपालको प्राचीन मौलिकता बोकेको प्रदेश हो । यस प्रदेशमा व्याप्त विभिन्न खाले मौलिक...	बिस्तृतमा
बुक बिल्डिङ विधिका विविध पक्ष : नेपालमा कस्तो विधि अपनाइएला ?
सञ्चार माध्यममा लगानी गर्न ठूला व्यावसायिक घरानाहरू आकर्षित हुन थालेको चर्चा चलिरहकै बेला दुई अर्बभन...	बिस्तृतमा
श्रम सम्बन्धमा सहमतिको बिन्दु
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा क...	बिस्तृतमा
असार २, बागलुङ । प्रेक्षालय खचाखच छ । मानिसहरू पलेंटी कसेर बसेका छन् । मञ्चपट्टि रहेका छन् , योगगुरु...	बिस्तृतमा
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल चलाउने शिक्षकले आफ्नो वास्तविक फोटो राख्नुपर्ने र प्रोफाइल विवरण पनि साँचो...	बिस्तृतमा
असार ३, काठमाडौं । सिंगापुरमा आयोजना हुने आइसिसी टी ट्वान्टी विश्वकप छनोटको एशिया फाइनल खेलका लागि म...	बिस्तृतमा
असारभित्र पहिलो किस्ता नलिए लाभग्राहीबाट हटाइने
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालसम्म अनुदान सम्झौता नगरेका लाभग्राहीलाई यही असार २१...	बिस्तृतमा
मौद्रिक नीतिलाई डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनको सुझाव : ‘प्रतीतपत्र, ब्रोकर, क्रेडिट कार्डको कारोबार गर्ने सुविधा देऊ’